भगवान शिव ! सभ्य र शान्त मात्र होइन, त्यति नै क्रोधी पनि थिए !! - लोकसंवाद
भगवान शिव जति सभ्य र शान्त छन्, त्यति नै क्रोधी भएको बताउँदै आएको हामी पाउँछौँ । शिवको व्यक्तित्वलाई लिएर शिवका अनुयायीहरुले 'यदि बुझ्न खोज्याै‌ र बुझ्न सक्यौँ, भने जीवनको सत्यको धेरै नजिक पुग्न सकिने ' बताउँदै आएकाे पाउँदछाैं । महाशिवरात्रि पर्वकाे अवसरमा शिवको स्तुति गर्नुको साथै उनीबाट धेरै कुरा सिकेर प्रेरणा पनि लिन सिकने विश्वास गर्ने गरिन्छ ।
ध्यान र नियन्त्रण गर्ने क्षमता
शिवका अनुयायीहरुले शिव भन्दा ठुलो कुनै पनि योगी नभएकाे दावी गर्दछन् । भने जस्तो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई पर राखेर भए पनि शिवप्रति विश्वास राख्नु त्यति सजिलो भने छैन् । जबजब महादेव ध्यानमा बस्ने गर्दथे तबतब दुनियाँ उथलपुथल भएकाे सन्दर्भ विभिन्न धर्म ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरेकाे पाउँछाैं ।धर्म ग्रन्थहरुका अनुसार शिवको ध्यान कसैले भङ्ग गर्न नसकेकाे अनेकाैं सन्दर्भहरु उल्लेख गरेकाे पाइन्छ । त्यसै कारण, गुण र स्वनियन्त्रण गर्ने क्षमताका कारण नै शिवका रुपमा सबैले मान्दै आउनुका साथै अनुयायीहरु जीवनको कुनै पनि चिज प्रति नियन्त्रण राख्ने क्षामताकाे विकास गर्ने कलाकाे अनुसरण गरेकाे हामी पाउँछाे ।
विष सेवन र नीलकण्ठकाे उपमा
शिवका बारेमा अर्काे के मान्यता रहि आएकाे छ भने समुन्द्र मन्थनबाट जब विष बाहिर आयो, तब सबै देवताले पाइला पछाडि हटाए । किनकि विष कसैले पनि पिउन सक्दैनथे । यस्तो अवस्थामा शिवले आफू स्वयंले विष सेवन गरेर देखाएका थिए । त्यसैले शिवलाई नीलकण्ठ भन्ने उपमा दिइएको थियो । यस घटनाबाट के शिक्षा लिएकाे पाइन्छ भने 'मानिसकाे जीवनमा आउने नकारात्मक चिजहरूलाई आफू भित्र नै राखेर बाहिर निस्केर सकारात्मकतालाई अङ्गाल्नु पर्छ' ।
आफ्नाे खुशीकाे लागि जे पनि गर्न तयार
शिवजीको जीवनशैली होस वा उनको अवतारको कुनै पनि रूप होस जुनसुकै रूपकाे अलग अलग अर्थ लागाउने गरिएकाे पाइन्छ । ताण्डव गर्ने नटराज, विष पिउने नीलकण्ठ, अर्धनारीश्वर, सबै भन्दा पहिला प्रसन्न हुने देवता र सही बाटो देखाउने भगवानका रुपमा शिवका अनुयायीहरुले लिने गरेकाे पाइन्छ ।
जुनसुकै कुरा सजिलोसँग अप्नाउन सक्ने
शिवले सम्पूर्ण रूप धारण गरी के सन्देश दिन खाेजेकाे देखिन्छ भने जुन चिजलाई आफ्नो आसपास देख्न पनि सक्दैनौ । तर त्यो कुरालाई उनले सजिलोसँग अपनाउन सहजै सक्ने व्यक्तित्व शिवकाे रहेकाे चरित्र चित्रण गरेकाे पाउँछाै । विभिन्न धर्म ग्रन्थहरुमा उल्लेख भए अनुसार शिवकाे विवाहमा भूतहरूको मण्डल नै पुगेका थिए । त्यसैकाे प्रतिक स्वरुप शिवले घाँटीमा सर्पको माला लगाएको हुन भन्ने विश्वास रहँदै आएकाे छ ।
आफ्नो प्राथमिकतामा अडिग
शिवका बारेमा अन्य के पनि मान्यता राखेकाे पाइन्छ भने उनले संधै आफ्नो प्राथमिकताहरूलाई कहिलै पनि भुल्दैनथे । शिवले आफ्नी श्रीमतीसँगको प्रेम र सम्मानलाई सबैभन्दा माथि राख्नुको साथै आफ्ना साथीहरू अथवा भक्तहरूलाई पनि उचित स्थान दिने भगवानका रुपमा व्याख्या गरिदै आएकाे पाउँछाै । त्यसै कारण शिवलाई देवता,असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, यक्ष आदि सबैले पूजा आरधना गर्ने गरेकाे धार्मिक विश्वास रहि आएकाे पाउँदछाै‌ ।